သူခိုးက သူ့ခိုးရာပါပစ္စည်းပျောက်မှာ စိုးရိမ်နေသလိုမျိုး (Beggar Citizen) | MoeMaKa Burmese News & Media
တရုတ်သံရုံးရဲ့ကျေညာချက်ထဲမှာ “ မုံရွာကြေးနီ စီမံကိန်းဟာ တရုတ် မြန်မာ ၂ ဖက် စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းတွေအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်တယ်” လို့ အတိအလင်းဆိုထားပါတယ်။ နှစ်ဖက်စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်နော်။ စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်မပါဘူး။
မြန်မာပြည်တည်ကထဲက ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေလာကြတဲ့၊ အဲဒီကြေးနီမြေတွေကို စောင့်ရှောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက် မပါဘူး။
ဒီမြေကို တခါမှ ခြေမချဘူးတဲ့ တရုပ်ဝမ်ဘောင်ကုမ္ပဏီအကျိုးစီးချင်တိုင်းစီး၊ ပွားချင်တိုင်းပွားမယ်။
ဒီမြေကို ဘာမှ စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရှိတဲ့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအကျိုးစီးချင်တိုင်းစီး၊ ပွားချင်တိုင်းပွားမယ်နော်။
အဲဒီမြေကို တသက်လုံးဖက်တွယ်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနေသူတွေက အဲဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုအတွက် မြေတွေကို စွန့်ခွါပေးရမယ်။
ဒီမြေမရှိလဲ ဘာမှမဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီမြေကိုစွန့်ခွါပေးရမယ်။
ဝမ်ပေါင်နဲ့ ဦးပိုင်ကတော့ ဒီကရတဲ့ကြေးနီတွေနဲ့ လက်နက်ထုတ်မယ်၊ အနိုင်ကျင့်မယ်၊ ဗိုလ်ကျမယ်။
ဒီကရတဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့ သောက်ကြမယ်၊ စားကြမယ်၊ ပျော်ကြမယ်၊ ပါးကြမယ်၊ ငွေထုတ်ပိုက်ပြီးကမ္ဘာပတ်မယ်။
ရိုင်းရိုင်းပြောရင် ဖာချမယ်၊ လင်ငယ်ထားမယ်၊ မယားငယ်ထားမယ်၊ သမီးရဲ့ဦးမယ်၊ ဦးရဲ့သမီးမယ်၊၊ ဖဲရိုက်မယ်၊ ဂျင်ထိုးမယ်၊ ဘောလုံးပွဲလောင်းမယ်၊ တိုက်ဆောက်မယ်၊ ကားစီးမယ်။ သားသမီးကို နိုင်ငံခြားကျောင်းထားမယ်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းထားမယ်။
အဲဒီလိုတွေလုပ်ဖို့အတွက် ဒေသခံရွာသားတွေက တနယ်ပြီးတနယ်၊ တနေရာပြီးတနေရာ၊ အိုးအိမ်တွေစွန့်ပေးရမယ်၊ မြေတွေစွန့်ပေးရမယ်၊ ရေတွေအဆိပ်သင့်ပြီး ဒေသတခုလုံးအပျက်ခံရမယ်။ ကကြီးခကွေး ကောင်းကောင်းမသင်ရဘူး။
အဲဒီအတွက် ဝမ်ပေါင်နဲ့ဦးပိုင်ကလူတွေက ဒေသခံတွေကို သူတို့တိုက်တာနေအိမ်တွေ အစားပေးတာမဟုတ်၊ နေရာချင်းလဲပြီး ဒေသခံတွေ ရန်ကုန်ပို့၊ နေပြည်တော်ပို့၊ ပီကင်းပို့။ သူတို့က လက်ပတောင်းတောင်ခြေမှာလာနေ၊ အဆိပ်သင့်ရေလေးသောက်။ လူမပီမသကလေးလေးတွေမွေး။ အဲဒီလိုနေကြတာမဟုတ်။
မြန်မာလူမှုအလွှာအသီးသီးက ဝမ်ဘောင်နဲ့ဦးပိုင်ကိုယ်ကျိုးစီးပွား မတရားရှာကြတဲ့ကိစ္စမှာ ဘာလုပ်ပေးရမှာပါလိမ့်။
အောင်မင်းက ကျေးဇူးဆပ်ရမယ်ပြောလိုက်လို့ မြန်မာ့ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန်တွေ ချွတ်ခြုံကျသွားပြီထင်နေသလား။
အောင်မင်းက ကြောက်နေရပါတယ်ပြောလိုက်လို့ မြန်မာတပြည်လုံး တုံးလုံးလှဲပေးရမှာလား။ ပြောပါအုံး သံရုံးကြီးရယ်။
အဲဒီကုမ္ပဏီ ၂ ခုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဒေသခံတွေဘဝပျက်ပေးဖို့ ဘယ်လူလုပ်တဲ့ဥပဒေမှာမှ မရှိဘူး။
သံရုံးကြီးတို့လို ကြောင်ဖြူနဲ့ခုတ်ခုတ်၊ ကြောင်မဲနဲ့ခုတ်ခုတ်၊ ကြွက်ရဖို့အဓိကပေါ်လစီမှာတော့ ဒီဥပဒေမျိုးတွေ ရှိနိုင်တာပေါ့။
သေချာပါတယ်။ သံရုံးကြီးတို့မှာတော့ ရှိပါတယ်။
ဒို့သာသနာရဲ့ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ကြီး အထိမ်းအမှတ်တွေ လွယ်လွယ်နဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ လုပ်ကြတယ်လေ။ သံရုံးကြီးတို့မှာ ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးနဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ခြားမှ မခြားနိုင်တော့ဘဲ။ တားရကောင်းမှန်း မသိခဲ့ကြတာဘဲ။
နတ်နေကိုင်း မချိုင်ရဘူးဆိုတာ သိမှ မသိတာဘဲ။
ကမ္ဘာ့ဒဿနပညာရှင်တွေ တော်တော်များများ ကျေးဇူးသိရတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေ။
ဝိပဿနာဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာ ကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာမဆို တရားပြတိုင်း ဒီဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးကို ထုတ်ထုတ်ဆပ်နေကြ။
လယ်တီဆရာတော်ဟာ မြန်မာ့ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အဆက်ထုံးကြီးဆိုတာကို စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် သက်သက်လောက်သာ နုားလည်တဲ့၊ စီးပွားရေးအကျိူးအမြတ်ကို တရားဥပဒေလို့တောင်ထင်နေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမဲ့ ကုမ္ပဏီ၂ ခုက ဘာမှ မသိဘူး။ သိရကောင်းမှန်းလဲ သိပုံမရဘူး။
ဒို့ဆီမှာတော့ ဥပဒေနဲ့ညီစရာကို အကြောင်းမရှိဘူး။
ကုန်ကုန်ပြောရရင် လမ်းဘေးအကြော်တဲယဉ်ကျေးမှုနဲ့တောင် မညီဘူး။ အကြော်တဲကမှ သူ့နောက်က အိမ်ရှင် အဝင်အထွက်မထိခိုက်အောင် ဘယ်လိုနေပေးရမယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။
ဦးပိုင်အတွက်လဲ ဘာဥပဒေမှမရှိဘူး။ အဲဒီကုမ္ပဏီဟာ အောက်ခြေတပ်မတော်မိသားစုလေးတွေ အဆင်ပြေဖို့တဲ့။ တပ်မတော်အငြိမ်းစားကြီးတွေအတွက်တဲ့။ အဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထောင်ထားတာလို့ လွှတ်တော်ထဲမှာတောင် ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင် တရားဝင်ပြောသွားသေး။
တပ်မတော်မိသားစုလေးတွေ ဗိုက်ဝဖို့ အရပ်သားမိသားစုလေးတွေ ငတ်သေကြဥပဒေမရှိဘူး။
တပ်ထွက်တွေ အသက်ရှည်ဖို့ တပ်မထွက်တွေ မြန်မြန်သေကြဥပဒေမရှိဘူး။
ပြည်သူတွေ သက်သာချောင်ချိဖို့ဆိုတာတောင် ပါလိုက်သေး။ အဲဒါကြောင့် မသက်သာ မချောင်ချိတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကို ဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးသားဘဲ။
အဲဒါကြောင့် “သုံးသပ်ချက်ထဲမှာ မြန်မာလူမှုအလွှာအသီးသီးအနေနဲ့ စီမံကိန်း အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ဥပဒေနဲ့အညီ အနေအထားကောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ် ” လို့ဆိုပြီး မျှော်လင့်နေစရာကို အကြောင်းမရှိဘူး။
အဲဒီမြေတွေဟာ ဦးပိုင်၊ ဝမ်ဘောင်ကုမ္ပဏီ ၂ ခုလုံးနဲ့ကို ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်ဆို ကုမ္ပဏီဖြစ်နေလို့ဘဲ။ နောက်ပြီး ဝမ်ဘောင်က တရုတ်ပြည်က။ မြန်မာပြည်နဲ့ ဘာမှကိုမဆိုင်။ လက်ပတောင်းတောင်နဲ့ဆိုဝေးရော။
ဦးပိုင်က တပ်မတော်ကလူတွေ။ အငြိမ်းစားတွေ။ လုံလောက်တဲ့လုပ်ခလစာ၊ ပင်စင်လစာ၊ ယူထားပြီးသား။ ပင်စင်အပြင် နောက်ဆက်တွဲ အရပ်ဖက်ရာထူးပါ ပေးထားပြီးသား။ နိုင်ငံတော်က လုံလုံလောက်လောက်ပေးထားပြီးသား။ နေစရာတိုက်၊ စီးစရာကား၊ မာလီ၊ မာလီအတွက်လစာ၊ ကူလီ၊ ကူလီအတွက်လစာ၊ ထမင်းချက်၊ ထမင်းချက်အတွက်လစာ၊ အလုပ်၊ အကုန်၊ အကုန်၊ တတိုင်းပြည်လုံးကြွေးတင်ခံပေးထားပြီးသား။ လက်ရှိတပ်မတော်သားတွေအတွက်လဲ လုံလုံလောက်လောက်ပေးထားပြီးသား။
ဒီပြည်မှာ ကာကွယ်ရေးဟာ တပ်မတော်ဟာ စရိတ်အသုံးဆုံး။ ကြိုက်သလောက်သုံး။ စာရင်းတောင် မစစ်ဘူး။ လိုသေးရင် လွှတ်တော်ရှိတယ်။ ထပ်တောင်း။ လွှတ်တော်က တပ်ထွက်တွေရဲ့မာလီ၊ ကူလီဖိုးတောင်ပေးသေးတာ။ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းနေသူအတွက်တော့ ပြောကို မနေနဲ့တော့။ ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေထက် လစာ၊ ရိက္ခာ၊ နေစရာပိုလို့တောင် ပေးထားပြီးသား။
ဦးပိုင်ထဲမှာလဲ လက်ပတောင်းသားတယောက်မှမပါဘူး။ အဲဒီနေဖူးတဲ့သူ တယောက်မှမပါဘူး။ လက်ပတောင်းနဲ့ ဘာမှကို မဆိုင်ဘူး။ မင်းတို့ဖယ်ကြ၊ ဒို့ မင်းတို့မြေအောက်က ကြေးတွေတူးရောင်းမယ်လုပ်လို့ကို မရဘူး။ ရောင်းချင်းရောင်း သူတို့ဖာသာတူးရောင်းရမှာပေါ့။ ကြည့်လေ၊ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအမြတ်တွေတောင် တပ်မတော်မိသားစုတွေအတွက်တဲ့။ ပြည်သူတွေအတွက်၊ လက်ပတောင်းဒေသခံတွေအတွက်မှ မပါတာ။
သံရုံးကပြောသေးတယ်၊ “ဒီစီမံကိန်းဟာ သေးသေးဖွဲဖွဲ စီမံကိန်းလေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့၊ ၂ ဖက်လုံးအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ စီမံကိန်းလို့ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားပါတယ်၊ ၂ ဖက်လုံးအတွက်လဲ အကျိုးအမြတ်တွေ ဖန်တီးပေးနေပါပြီ၊ ဒေသခံအလုပ်သမား ၂ ထောင်ကျော်လောက်ကိုလဲ အလုပ်ခန့်ထားတာပါ၊ တကယ်လို့ တခုခုများဖြစ်ခဲ့ရင် လူတွေအများကြီး အလုပ်ပြုတ်ကုန်မှာပါ ” တဲ့။ လူနှစ်ထောင်ကြီးများတောင် အလုပ်ပေးထားဆိုကိုး။ တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် အလုပ်ပြုတ်သွားမယ်တဲ့၊ ဖြဲတောင်ချောက်လိုက်သေး။ ရီစရာကြီးဘဲ။
သိမ်းခံရထားရတဲ့၊ မင်းတို့ မြေစာပုံနေတဲ့စိုက်ပျိုးမြေ ဧက ခုနှစ်ထောင်မှာ လူနှစ်သောင်းလောက်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟဲ့၊ သံရုံးကြီးရဲ့။ တသက်လုံး၊ ဘာအန္တရာယ်မှမရှိ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။
ဘာတဲ့ “ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ ရပိုင်ခွင့်တွေ အခိုင်အမာ အကာအကွယ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ” တဲ့။
ဒေသခံတွေဖက်ကသာ အဲလိုလေး တချက်ဝင်စဉ်းစားလိုက်ရင် ဝမ်ပေါင်ကို သံရုံးကြီးကိုယ်တိုင် ပြန်ပို့လိုက်မိမှာဘဲ။
အင်း .. သူခိုးက သူ့ခိုးရာပါပစ္စည်းပျောက်မှာ စိုးရိမ်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေတာတော့ အမြင်မတော်ပါဘူး။
ဒေါ်စုပြောသလို သံရုံးကြီးတို့ပါ နိုင်ငံကြီးသားပီသကြဖို့ကောင်းတယ်။
One Response to သူခိုးက သူ့ခိုးရာပါပစ္စည်းပျောက်မှာ စိုးရိမ်နေသလိုမျိုး (Beggar Citizen)
tomahawk on December 3, 2012 at 1:41 pm
That statement from fucking chinese embassy in Rangoon is made big mistake to insult the sovereignty of Burma.
There is no need to issueastatement from foreign embassy to let the people of Burma to obey the rule of law of their own, this is totally unacceptable.
Actually, there is no rule or justice in Burma for so many years already.
All of unjust laws are to take action towards ordinary citizens not for authoritarians.
There are no justice , no rule of law in Burma.
Ask DASSK ? She will have to think what she had said in the past before she starts to answer about rule of law.